Metisse, Musca, MWM, OpenBox na PekWM: WM ọzọ 5 maka Linux | Site na Linux
Taa, anyị ga n'ihu isii post banyere Njikwa Window (Windows Managers - WM, na Bekee), ebe anyị ga-enyocha ihe ndị a 5, site na ndepụta anyị 50 a tụlere na mbụ.
"Ma ọ bụn X dabeere Window Manager e mere na ihe mgbaru ọsọ abụọ n'uche. Nke mbụ bụ ime ka ọ dịkwuo mfe maka ndị nyocha HCI ịhazi na itinye usoro njikwa windo ndị ọhụrụ. Nke abuo, mepụta WM ka ọ gbanwee na ụkpụrụ ndị dị (nke oge ya), mana ọ siri ike ma rụọ ọrụ nke ọma iji rụọ ọrụ kwa ụbọchị, nke mere na ọ bụ ikpo okwu zuru oke maka nyocha nke usoro ndị a chọrọ.".
Agaghị arụ ọrụ: Achọpụtara ọrụ ikpeazụ n’ihe dịka afọ 12 gara aga.
A naghị ele ya anya dị ka desktọọpụ ọhụụ, kama ọ bụ ngwaọrụ maka imepụta ụdị desktọpụ desktọọpụ.
Ejiri ya, dịka ọmụmaatụ, iji mejuputa sistemụ ihu Fa Userade Onye Ọrụ, sistemụ nke na-enyere mmegharị, nwughari na recombination nke eserese eserese dị ugbu a site na iji usoro aghụghọ.
Ejikwa ya iji kwado nnomi na ịmegharị arụmọrụ, yana iji jikọta ihu GTK + n'ime egwuregwu OpenGL nke Pok3D.
E kesara ya dịka "Live CD" nke Mandriva na mbido 2007, ọ dịkwa dị ka otu nhazi desktọọpụ ọkọlọtọ na nkesa Mandriva Linux.
“Musca bụ njikwa windo dị mfe maka X nke na-enye ohere ma ọnọdụ Tiling na Stacking. O yitere ya Ratpoison mana o nwekwuo enyi na enyi na iji uzo agu di mfe".
Ọrụ ngo: Achọpụtara ọrụ ikpeazụ gbasara afọ 3 1/2 gara aga. Agbanyeghị, ụdị nke ikpeazụ ewepụtara ka ọ dị ntakịrị karịa 7 afọ gara aga.
O nweghi ogwe onodu ogugu, ogwe osisi, ma obu ihe icho mma nke windo, ewezuga obere mpio windo nke na-egosi nlebara anya. Ọzọkwa, ọ kwadoro ọrụ ọtụtụ ihuenyo.
Igodo nke windo nwere ike ịnwe na ịpị aka na-elekwasị anya ma ọ bụ na-eduga agụ owuru kpamkpam. Ọnọdụ windo ahụ bụ akwụkwọ ntuziaka mana ọ dị mfe, na enweghị mmachi na etu esi ekekọrịta ihuenyo ahụ.
Ejiri dwm's "dmenu" ịba uru iji wepụta ngwa ma mezuo iwu dị iche iche a na-edeghị na hotkeys.
Ya interface bụ kensinammuo. A na-ewere ụkpụrụ ndabere ya dị mfe ma dịkwa mfe nghọta. Ewere ya dị ezigbo oke na usoro nke oghere. Na mgbakwunye, usoro nchịkọta nke onye njikwa a dị nso na desktọọpụ ugbu a.
Maka ama ndi ozo banyere otu esi eji ya, enyere ihe ndia aka njikọ.
“Motif Window Manager (MWM) bụ X window njikwa dabere na Motif Toolkit.".
Ọrụ ngo: Achọpụtara ọrụ ikpeazụ na ọnwa 3 gara aga, ọ bụ ezie na ewepụtara ụdị ọhụrụ ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 3 afọ gara aga.
Ọ na-atụle a nnọọ ìhè WM, ma na ezi arụmọrụ na ezi ntọala.
Ọ na-enye Interface User nke na-akwado iji «Alt-Tab» maka ịgbanye windo, ma na - enye Desktop Environment, yana X Resource Database (/ ụlọ / ngwa-defaults / na Oge ojiri gaa), usoro X Session Manager protocol, X edited resources (wijetị) protocol, a set of desktop icons, an optional use of images for decorating, and non-virtual desktop panning support.
Iji jikwaa windo ndị ahụ, ọ na-eji faịlụ ederede dị larịị iji hazie menus, mepụta maapụ ọrụ ndị ọrụ, na-ebu njirimara njikwa na ọrụ ndị ọrụ ahụ mere.
WM emelitere a na-ahụkarị n'ọtụtụ ebe dị iche iche GNU / Linux Distros, n'okpuru aha ngwugwu "mwm"Ya mere, dabere na njikwa ngwugwu ejiri, eserese ma ọ bụ ọnụ, enwere ike itinye ya ngwa ngwa. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara WM ndị a njikọ ma ọ bụ nke ọzọ njikọ.
"Onye nhazi windo na-esote na-esikwa ike ịhazi nkwado dị ukwuu".
Ọrụ ngo: Achọpụtara ọrụ ikpeazụ n’ihe dịka obere afọ 5 gara aga. Agbanyeghị, ụdị nke ikpeazụ ewepụtara (3.4.11) bụ ihe karịrị afọ 10 gara aga. Otú ọ dị, e nwere nsụgharị emelitere ọzọ, 3.6.1 nke bụ onye nwere mgbanwe kachasị ọhụrụ.
A maara nke ọma maka ọdịdị dị ntakịrị. Ọ dabere na BlackBox ma yabụ na-eji ụdị anya yiri ya ma ọ bụ kwekọrọ, ebe ị na-enye ọnụọgụ nhọrọ ka ukwuu maka ndị mmepe isiokwu karịa otu ma ọ bụ ndị yiri ya.
Ọ-enye gị ohere rụọ ọrụ nke ọma jikwaa ngwa na mpụga nke a jupụtara desktọọpụ gburugburu ebe obibi. Karịsịa, ọtụtụ ngwa edere maka GNOME na KDE. Na mgbakwunye, ọ gụnyere nkwado maka ụkpụrụ kachasị ọhụrụ sitere na ominiraesktop.org, yana iji nlezianya na-agbaso ụkpụrụ ndị toro eto. Na mgbakwunye, enwere ike iji ya dịka WM nke Desktọpụ Gburugburu ndị ọzọ, na-eme ka nke ikpeazụ ka mma.
Enwere ike ịhazi ya, yabụ na-enye gị ohere ịgbanwe ihe niile anya na arụmọrụ metụtara metụtara desktọọpụ na iji mepụta ụzọ ọhụrụ eji eji na ịchịkwa ya. N'ụzọ dị otú ahụ enwere ike iji ya mee ihe dị elu, mana enwere ike idobe ya nke ukwuu, na-edebe ndabara ndabara ya, nke pụtara na enwere ike ịmegharị ya na onye ọ bụla, ebe ị na-enye njikwa na-enweghị ịmanye ịme ihe ọ bụla dị elu ma ọ bụ dị mgbagwoju anya. .
WM emelitere a na-ahụkarị n'ọtụtụ ebe dị iche iche GNU / Linux Distros, n'okpuru aha ngwungwu "igbe mbata"Ya mere, dabere na njikwa ngwugwu ejiri, eserese ma ọ bụ ọnụ, enwere ike itinye ya ngwa ngwa. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara WM ndị a njikọ ma ọ bụ ndị a njikọ y njikọ.
"Ma ọ bụn njikwa window nke na-adabere na aewm ++ window njikwa, mana ghọrọ usoro nke na ọ naghị adị ka aewm ++. Ọ nwere atụmatụ atụmatụ gbasaa nke ukwuu, gụnyere nchịkọta windo (nke yiri ion, pwm, ma ọ bụ fluxbox), autoproperties, xinerama, keygrabber na-akwado igodo, na ọtụtụ ndị ọzọ.".
Ọrụ ngo: Achọpụtara ihe ikpeazụ mere ihe dịka ntakịrị afọ 1 1/2 gara aga. Agbanyeghị, mbipụta ikpeazụ ewepụtara (0.1.13) bụ ihe karịrị 9 afọ gara aga. Agbanyeghị, enwere ụdị emelitere ọzọ na mmepe, 0.1.18 nke bụ nke nwere mgbanwe kachasị ọhụrụ.
Ọ dị nnọọ mfe ma nwee uche, nke na-enye ya njirimara nke ịbụ onye njikwa windo na-adịghị ahụ anya.
Ọ nwere nhazi dị elu, iji kwe ka ọtụtụ ndị ọrụ rụọ ọrụ ma gbanwee ma ọ bụ hazie ya n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche.
Ọ na-enye akụrụngwa ma ọ bụ ntọala akpaka, maka ndị ọrụ ahụ, ndị na-achọghị ime ihe dị elu mana ha chọrọ ka ihe pụta dị ka ha kwesịrị ịdị mgbe ha na-amalite ngwa ahụ, ya bụ, ịrụ ọrụ dịka WM zuru oke.
Gụnyere iji ihe eji eme ihe Keygrabber, maka iji nnukwu ihe maka mmadụ niile.
WM emelitere a na-ahụkarị n'ọtụtụ ebe dị iche iche GNU / Linux Distros, n'okpuru aha ngwugwu "pekwm"Ya mere, dabere na njikwa ngwugwu ejiri, eserese ma ọ bụ ọnụ, enwere ike itinye ya ngwa ngwa. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara WM ndị a njikọ na nke a njikọ.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere ndị a na-esote 5 «Gestores de Ventanas», n'adabereghị na nke ọ bụla «Entorno de Escritorio», akpọ Metisse, Musca, MWM, OpenBox na PekWM, nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Metisse, Musca, MWM, OpenBox na PekWM: WM ndị ọzọ maka Linux